Mametraka sakana ho an’ireo sembana ny fepetran’ny valanaretina any Azerbaijan · Global Voices teny Malagasy
Nakatona ireo ivontoeram-panarenana an'ny fanjakana noho ny COVID-19
Voadika ny 07 Mey 2021 3:59 GMT
“COVID-19 sy ny fahasembanana any Indonezia” avy amin'ny ILO (OIT) any Azia sy Pasifika, nampiasana lisansa CC BY-NC-ND 2.0
Tamin'ny volana Septambra 2020, nanapaka tanteraka ny fisotroan-dronono ho an'ny olona manana fahasembanana ny Minisiteran'ny Asa sy ny Fiarovana Ara-tsosialy any Azerbaijan, izay anisan'ny fepetra kendrena, hoy ny tompon'andraikitra, “hampihenana ny sembana sandoka.”
Mandidy ny fepetra fa ireo olona izay mila mijanona any amin'ny hopitaly farafahakeliny isa-taona no afaka misitraka ny tombontsoa avy amin'ny governemanta. Mila mandefa taratasy fanamarinana any amin'ny manampahefana voakasik'izany izy ireo mba hitakiana ny volany.
Vao mainka niharatsy ny fepetra efa nampiady hevitra noho ny fameran'ny valan'aretina COVID-19 any Azerbaijan, izay nahitana fanakatonana vonjimaika ny ivontoeram-panarenana an'ny fanjakana manerana ny firenena mba hampihenana ny fifampikasohana.
Vokatr'izany dia betsaka ireo Azerbaijanis manana fahasembanana no tsy afaka manaporofo fa manana fahasembanana izy ireo satria tsy afaka hokarakaraina any amin'ny tobim-pahasalamana nakatona.
Ny fisotroan-dronono avy amin'ny governemanta no hany loharanom-bolan'ny olom-pirenena sembana maro. Tombanana ho maherin'ny fito arivo ny Azerbaijanis no very vola fandray hatramin'ny volana Septambra, raha ny angombaovao avy amin'ny Minisitera ihany.
Tamin'ny resadresaka nifanaovana tamin'ny volana Septambra 2020, nilaza ny sekretera an-gazety ao amin'ny masoivohom-panjakana misahana ny fitsaboana sy ny fahaizana manokana ara-tsosialy ary ny fanarenana, Gulnar Azizova, fa hanokatra indray ireo ivontoeram-panarenana ireo ny tompon'andraikitra raha vantany vao mifarana ny fepetran'ny famerana amin'ny COVID-19. Tamin'ny 19 Martsa, nanitatra ny fihibohana tramin'ny volana Jona ny manampahefana ao Azerbaijan.
Nahatonga ny fianakaviana maro ireo fihemorana ireo hanao fihetsiketsehana manoloana ny tranoben'ny Ministeran'ny Asa sy ny Fiarovana Ara-tsosialy tamin'ny fiandohan'ny volana Martsa nitaky ny hamerenana amin'ny laoniny ireo fisotroan-dronono ireo.
Fianakaviana manao hetsi-panoherana teo ivelan'ny Ministeran'ny Asa sy ny Asa Sosialy ao Baku renivohitra ny 10 Martsa 2021. Horonantsary pikantsary/Azadliq Radio.
Nilaza tamin'ny fampitam-baovao tao an-toerana teo ivelan'ny tranoben'ny Minisitera ny renim-pianakaviana iray fa maniry ny hisokafan'ny ivontoeranam-panarenana indray izy ireo, ny famerenana ny fisotroan-dronono ary ny fampitomboana ny vola sitrahana noho ny fihemorana vokatry ny toe-draharaha ara-toekarena ankehitriny.
Tamin'ny volana Martsa 2020, nampitandrina i Catalina Devandas, Iraka manokan'ny Firenena Mikambana momba ny zon'ny sembana fa” kely ny zava-bita tamin'ny fanomezana torolàlana sy ny fanampiana ilain'ny olona manana fahasembanana mba hiarovana azy ireo mandritra ny valan'aretina COVID-19.” Nampiany fa tokony hamaly ny filan'ny sembana ny fanjakana amin'ny alàlan'ny fandraisana fepetra fanampiny “hiantohana ny fitohizan'ny fanohanana” ho an'ny vondrona izay efa miatrika fanilikilihana lalim-paka ao amin'ny vondrom-piarahamonina misy azy ireo.
Anisan'ny tolokevitra navoakan'i Devandas ny fampitomboana ny fanampiana ara-bola ho an'ity vondrom-piarahamonina ity hanefana ny filàna fototra, toy ny fanaterana sakafo sy ny fanafody.
Nangataka fanampiana tany amin'ny fianakaviana ny olom-pirenena sembana sasany rehefa tsy nahazo ny fanohanana avy amin'ny governemanta ary efa nahazo fanarenana ara-pitsaboana tany amin'ny toeram-pitsaboana tsy miankina.
Hoy i Refail Veten-Das Quliyev, 58 taona, mpampianatra taranja Fizika misotro ronono, tao amin'ny Facebook:
Nanery ahy hanaraka fitsaboana tany amin'ny foibem-panarenana manokana ny olana lehibe teo amin'ny fahasalamako. Tsy namaly ahy ny ivontoeram-panarenana an'ny fanjakana na dia teo aza ny ezaka maro nataoko. Mba tsy hiainako ny zavatra nahazo an'i Malik Abbasov [lehilahy sembana iray maty tamin'ny volana Martsa 2021], dia mahazo fitsaboana tao amin'ny Ivotoeram-panarenana tsy miankina Surakhani aho noho ny fanohanan'ny namako sy ny fianakaviako. Tsara fanahy sy mikarakara tsara ny mpiasa. Mahafa-po ny fitsaboana. Tompon'andraikitra amin'ny asany izy ireo. Voaara-maso tsara ny marary. Dokotera nandia fianarana, matihanina ary mahay ary manaja ny asany i dokotera Ramatoa Sevinj. Manara-maso tsara ny fahasalaman'ny marary izy ary manohy manao izany rehefa manaraka tondrozotra. Afaka mampiasa ny tolotr'izy ireo ny olona manana fahasembanana manana fahahafa-manao mandeha any amin'ity toerana ity.
Araka ny fitsipiky ny firenena dia ireo Azerbaijanis manana fahasembanana sy ny marary mijanona am-pandriana no mahazo fikarakarana ara-pitsaboana any an-trano avy amin'ny governemanta. Na izany aza, tsy ny rehetra no mahazo izany ao amin'ny firenena, araka ny tatitra tao an-toerana tamin'ny volana Novambra 2020 momba ny fiantraikan'ny COVID-19 amin'ireo zokiolona sy avy amin'ny mpikarakara avy ao amin'ny Federasiona Iraisampirenen'ny Vokovoko Mena sy ny Tsinambolana Mena (IRFC).
Manamarika ihany koa ny tatitra fa tena tsapan’ ireo zokiolona manana aretina mitaiza sy ireo olona manana fahasembanana ny fihenan'ny fahafaha-miditra any amin'ny hopitaly, ny fivarotam-panafody, ny sampana vonjy taitra ary ny poliklinika.